Ukubethelwa – Isigaba – Windows – Vessoft
Ukubethelwa – Windows
Ukubethelwa Internet Isofthiwe uxhumano sivikelekile futhi silondekile sessions web internet. Ukuthi ubumfihlo banoma imiphi imisebenzi inthanethi ibangelwa ushintsho IP-ikheli yomsebenzisi.
Ukubethelwa Internet Isofthiwe for the ukuvakashelwa lemfihlo amawebhusayithi on the internet. Isofthiwe isekela ubuchwepheshe ekhethekile ukuthi encrypts ukudluliswa kwedatha nolwazi kusuka besithathu.
Ukubethelwa Internet Isofthiwe ukusebenza nge ubuchwepheshe VPN. Isofthiwe ine amathuluzi ukudala i channel ngekhodi njengendlela iphuzu-to-phuzu noma iseva-to-amaklayenti.
Ukubethelwa Internet Isofthiwe ukufinyelela website ivinjiwe futhi ukuvimbela imingcele internet. Futhi isofthiwe kwenza ukuvikela akhawunti yomsebenzisi bese amaphasiwedi ngokumelene Nokugenca.
Ukubethelwa Internet Uqinisekisa kuhlala engaziwa futhi ulondekile internet. Isofthiwe isebenzisa isitoreji yayo siqu ifu ukufaka ikhowudi kwimininingo yonke imibuzo internet.
Proxifier 3.28 Standard futhi Portable
Ukubethelwa Internet Ithuluzi unika isofthiwe inethiwekhi ikhono ukusebenza ngokusebenzisa seseva uma engekho yayo. Futhi isofthiwe Bypasses nemikhawulo firewall kanye kwenza ukufihla-ikheli le-IP.
Ukubethelwa Akwazi ukugcina Ithuluzi Elula ukusebenza nge oshayelayo DVD. Isofthiwe ikuvumela ukuba weqa ukuvikelwa DVD bese ukopisha okuqukethwe njengoba iqoqo amafayela noma ISO image.